मोबाइल निकै ढिलो चार्ज हुन्छ ? यसो गर्नुस् – Hotpati Media
मोबाइल निकै ढिलो चार्ज हुन्छ ? यसो गर्नुस्
१६ पुष २०७३, शनिबार ०३:५३ मा प्रकाशित (4 बर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : २ मिनेट
काठमाडौं-मोबाइल फोन चलाउन निकै आवश्यक परेको बेला फोनको ब्याट्री चार्ज हुन घण्टौँ लाग्ने समस्या आउँदा कस्तो छटपटी हुन्छ ? हामी सबैले भोगेकै कुरा हो । तर यसको समाधानका लागि कुनै जादुमय तरिका छैन । यद्यपि केही काइदा छन् जसले ब्याट्रीलाई राम्रो ढंगबाट चार्ज गर्नका लागि लाग्ने समयलाई केही कम गर्न सहयोग गर्छन् । ती उपाय तपाइँले पनि अपनाउन सक्नुहुन्छ ।
· फ्लाइट मोडमा राख्नुहोस्: यो एउटा निकै साधारण तरिका हो जसले तपाइँको फोन तिव्र गतिमा चार्ज भैरहन्छ । यसो गर्दा लगभग मोबाइल अफ गरेर चार्ज गरे सरह नै तिव्र रुपमा चार्ज हुन्छ । जब तपाइँले फोनलाई फ्लाइट मोडमा राख्नुहुन्छ यसको कल गर्ने, इन्टरनेट ब्राउजिंग तथा जिपिएस जस्ता फिचरहरुले काम गर्दैनन् । तर फोनको चार्ज तिव्र गतिमा हुन्छ र अलार्म पनि चालू हालतमै रहेको हुन्छ ।
· स्विचअफ गर्नुहोस्: जब तपाईं मोबाइलको स्विच अफ गरेर चार्ज गर्नुहुन्छ तब मोबाइलको ब्याट्री छिटो चार्ज हुन्छ ।
· यु एस बी पोर्टबाट चार्ज नगर्नुस्: मोबाइल फोनलाई यु एस बी पोर्टको साटो मोबाइल चार्जरबाट सिधै बिजुलीमा जोडेर चार्ज गर्दा छिटो चार्ज हुन्छ ।
· उचित तापक्रममा राख्नुहोस्: धेरै तापक्रमले ब्याट्रीको चार्ज गर्ने क्षमतालाई कम गरिदिन्छ । फोन तात्नाले ब्याट्रीको क्षमतामा कमी आउँछ । त्यसैले घाममा राखेर फोन चार्ज नगर्नुहोस् ।
· आधिकारिक चार्जरको प्रयोग गर्नुहोस्: चार्जर उस्तै देखिएपनि एउटै हुँदैनन् । सस्तो खालका कमसल चार्जरको प्रयोगले फोन खराब बनाउँदछ । त्यसैले सधै ब्राण्डेड तथा आधिकारिक चार्जको प्रयोग गर्नुहोस् । यसले फोन छिटो चार्ज हुनुका साथै सुरक्षित पनि हुन्छ ।
उत्तर कोरियाको आणविक गतिविधि अध्ययन
सामसुङको ग्यालेक्सी एस २१ सिरिज जनवरीमा